Jereo ny fomban-drazana tsara indrindra any Irlandy | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | kolontsaina, General, Irlandy
Irlandy, fantatra amin'ny anarana hoe Republic of Ireland miavaka amin'ny kolontsaina sy fomban-drazana marihina. Ny renivohiny dia any Dublin, fa misy tanàna manan-danja hafa toa an'i Cork, Limerick na Galway. Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba ny fomban-drazana any Irlanda isika, satria firenena iray manintona ny saina ho an'ny sasany amin'izy ireo, toy ny Andron'i St. Patrick.
Rehefa miresaka isika Irlandy dia miresaka momba ny nosy iray reharehan'ny kolontsaina sy ny fomban-drazana ananany isika. Na dia taonjato maro lasa izay dia natambatra ho an'ny Fanjakana Mitambatra izy rehetra, amin'izao fotoana izao dia ny ampahany avaratra ihany no azy, izay nanjary fifandonana maro ihany koa. Saingy mihoatra ny tantarany dia misy zavatra maro mampiavaka ity tany ity.
1 Andron'i Saint Patrick
2 Ny Leprechauns
3 Fanambadiana nentim-paharazana any Irlandy
4 Hurling, fanatanjahantena Irlandey
5 Mozika sy dihy irlandey
7 Pubs sy Guinness
Andron'i Saint Patrick
Tsy afaka miresaka momba an'i Irlandy ianao raha tsy miresaka momba ny Andron'i St. Patrick, izay ankalazaina manerantany. Ity andro ity dia niandoha tamin'ny a Andro fialantsasatra kristiana ary mikendry ny hanomezam-boninahitra an'i Saint Patrick, ny olo-masina mpiaro an'i Irlanda. Ankalazaina amin'ny 17 martsa izy io ary ny zava-drehetra dia mihaingo amin'ny maitso mahery matanjaka izay mifandray amin'ity andro ity Fetim-pirenena io any amin'ny Repoblikan'i Irlandy, noho izany dia andro tsara hankafizana ireo fety raha eto amin'ny nosy isika. Ny iray amin'ireo matso malaza indrindra dia atao ao Dublin renivohitra, ary matetika ny fankalazana dia maharitra andro maromaro. Na aiza na aiza no ahitantsika ny hazo sarimihetsika izay maneho ny fampianaran'ny Trinite Masina izay nentin'i Saint Patrick tany Irlandy ary ankehitriny dia mifandray amin'ny sarin'i Irlandy.
Etsy ankilany, azo atao ny mahita olona miakanjo akanjo maitso ary toy ny leprechauns amin'ny fetin'i Saint Patrick, satria ny zava-drehetra dia mifamatotra amin'ny lovantsofina Irlandey. IRETO leprechauns dia leprechauns izay an'ny angano Irlandey ary miakanjo akanjo maitso mahazatra sy misy satroka mampiavaka azy ireo foana. Ireo tarehin-tsoratra ireo dia ampahany amin'ny tantara malaza sasany izay nampiala voly ny taranaka maro ary voalaza fa manafina volamena, noho izany dia mampiavaka azy ireo amin'ny vilany volamena iray izy ireo.
Fanambadiana nentim-paharazana any Irlandy
Eto amin'ity firenena ity koa misy fomba amam-panao manodidina ny lanonana fampakaram-bady. Ny fampakaram-bady Irlandey dia manana dingana sasany izay nentim-paharazana ary lavitra ny fampakaram-bady efa nahazatra antsika. Ny famehezana ny fatotra dia fomban-drazana tena tsara iray izay nametrahan'ny mpivady ny tanany teo am-pitanisa ireo teny izay nianianany fa niaraka. Mandritra izany fotoana izany, na iza na iza mitarika ny lanonana dia mamatotra ny tanany amin'ny kofehy miloko izay hanehoana izany firaisana izany. Teo koa ny fomban'akanjo akanjo soavaly izay tsara vintana fa ankehitriny dia novana ho mariky ny soavaly mitafy ny ampakarina. Voalaza ihany koa fa amin'ny andro fampakaram-bady ny goisa dia handraho ao an-tranon'ny ampakarina ary ny mpampakatra dia mila mihinana sira sy oatmeal amin'ny fiandohan'ny fanasana mba ho tsara vintana.
Hurling, fanatanjahantena Irlandey
Este avy amin'ny Celtic ny fanatanjahantena Ary mety tsy dia mahazatra antsika any amin'ny firenentsika izany, fa eo dia tena ilaina izany. Milalao baolina sy tsorakazo na tehina izay mitovy amin'ny hockey no milalao azy fa malalaka kokoa. Afaka mihazakazaka mitondra ny baolina amin'ny tany ianao, tohanan'ny tehina na eny an-tananao, fa amin'ny tranga farany dia dingana telo ihany no azonao atao. Iray amin'ireo fanatanjahan-tena any Irlandy izay manana mpanaraka maro dia maro ny baolina kitra Gaelic, karazana lalao eo amin'ny baolina kitra fantatsika sy ny rugby.
Mozika sy dihy irlandey
Tsy afaka mankany Irlandy nefa tsy mankafy ny mozika sy ny dihiny mahazatra. Ity mozika folk ity dia fantatra amin'ny toerana maro amin'ny mozika style Celtic. Misy feo sy feon-kira maro voatahiry nandritra ny taonjato maro. Any Irlandy dia tokony hitady fampisehoana dihy Irlandey misy dihy nentim-paharazana koa isika.
Bloomsday dia tsy iray amin'ireo fomban-drazana izay misy ifandraisany amin'ny Celts ary miverina an-jato taonany maro io saingy eo izy ary miha manandanja kokoa. ny Ny 16 Jona no ankalazana ity fialantsasatra ity, nanomboka tamin'ny 1954, izay omena ny fanajana ny toetran'ny ilay tantara an-tsary Ulysses nosoratan'i James Joyce. Ny iray amin'ireo fomban-drazana dia ny mihinana mitovy amin'ilay mahery fo tamin'izany andro izany. Saingy nifantoka tamin'ny fanarahana ny dian'ny Dublin koa izy. Misy fihaonana maromaro ao an-tanànan'ny olona izay miakanjo ihany koa ho an'ity fotoana ity.
Pubs sy Guinness
Misy zavatra iray hafa mety ho iray manontolo fomban-drazana amin'ny fomba fiainana irlandey. Raha mitsidika an'i Dublin ianao dia tsy halahelo ny Temple Bar, izay ahafahanao mankafy ireo trano fisotroana irlandey mahazatra, toerana hankafizanao mozika, resaka ary mazava ho azy fa Guinness tsara, ny labiera tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fomban-drazana Irlandey
Fetin'ny Patiosin'i Córdoba